Shiinaha YASKAWA robot maaraynta robot warshad MOTOMAN-GP35L iyo saarayaasha | Jiesheng
Ku YASKAWA robot maarayn caqli leh MOTOMAN-GP35L wuxuu leeyahay awoodda xamuul qaadista ugu badan ee ah 35Kg iyo ugu badnaan dheereynta oo ah 2538mm. Marka la barbardhigo moodooyinka la midka ah, waxay leedahay gacan dheeri ah oo dheeri ah waxayna ballaarineysaa kala duwanaanta dalabkeeda. Waxaad u isticmaali kartaa gaadiid, qaadid / xirxirid, pallatizing, isku imaatin / qaybinta, iwm.
Miisaanka jirka ee robot maaraynta caqliga leh MOTOMAN-GP35L waa 600Kg, heerka fasalka ilaalinta jirka wuxuu qaataa heerka IP54, curcurka ilaalinta fasalka dhudhunka waa IP67, waxayna leedahay qaab dhismeed kahortag fara-galin. Hababka rakibaadda waxaa ka mid ah sagxad-la-fuulo, hoos-u-jeed, derbi-ku-rakiban, iyo jaan-gooyo, taas oo lagu hagaajin karo hadba baahida macaamiisha.
600Kg 4.5kVA 180 ° / seken 140 ° / seken
Tirada fiilooyinka u dhexeeya MOTOMAN-GP35L robot maarayn caqli leh iyo golaha xakamaynta ayaa la dhimay, taas oo hagaajinaysa joogtaynta iyada oo la siinayo qalab fudud, taas oo si weyn u yareyneysa waqtiga hawlgallada beddelka fiilada joogtada ah. Naqshadeynta yareynta faragelinta waxay u oggolaaneysaa meeleynta cufnaanta sare ee aalado, iyo gacanta sare oo toosan ayaa u oggolaaneysa helitaanka fudud ee qaybaha aagga cidhiidhiga ah. Anteeneyaasha la dheereeyey waxay hagaajin karaan baaxadda aaladda, iyo dhaqdhaqaaqa ballaaran ee curcurka wuxuu baabi'inayaa fursadda faragelinta, taas oo kordhinaysa dabacsanaanta dalabka. Meelo badan oo rakibid ah oo loogu talagalay qalabaynta iyo dareemayaasha ayaa fududeynaya is-dhexgal sahlan si loo daboolo shuruudaha mashruuca gaarka ah.
Hore: Yaskawa Qabashada Robot Motoman-Gp25
Xiga: YASKAWA MOTOMAN-GP50 robot raritaan iyo dejin
Qabashada Gacanta Robot, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, 6 Axis Qabashada Robot, Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, Robotka Gacanta otomaatiga ah, Aaladda otomaatiga ah ee Robot,